Ergeyga Qaramada Midoobey ee carrurta oo soo dhaweeyey cunqabataynta la saaray dadka ku xad-gudba xuquuda carruurta ee Somalia. – Radio Daljir
Newyork, Aug 04 – Ergeyga Qaramada Midoobey ugu qaabilsan xuquuqda carruurta xilliga khilaafyada hubaysan ayaa soo dhoweeyey qaraarka golaha ammaanka ee cunaqabataynta iyo xayiraadaha kusoo rogaya shaqsiyaadka iyo dhinacyada kale ee ku xad-gudba xuquuqda carrurta.
“laga bilaabo maanta haddii aad disho, curyaamiso, askari u qorato ama galmo ahaan aad u isticmasho ama haddii aad weerarto iskuuladooda iyo isbitaalladooda, waxaad waajahayhaysaa cunaqabatayn adag “ayey tiri Radhika Coomaraswamy, oo ah ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobey ugu qaabilsan dhawrista xuquuqda carruurta iyo khilaafyada hubaysan.
Waxayna ay intaasi raacisay ” tani waa hal-tallaabo oo u dhow in la joojiyo in carruurta lagu gabood-falo iyadoo aan laga baqanayn in aan laysu raacandoono xiliyada dagaalka ”
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa meelmariyey tallaabooyin adag oo laga qaadayo dadka ku xad-gudba xuquuqda carruurta xilligii lagu guda jiray kordhinta waqti-hawleedka kooxda dabagalka xayiraada hubka ee Eritrea iyo Somalia.
Xayiraadda lasoo rogay ayaa saamayneysa shaqsiyaadka iyo dhinacyada kale ee maamulada ee ku xadgudba xuquuqda carruurta, waxana ay waajahayaan xayiraadda dhanka safarka ah iyo in lacagaha laga fariisiyo.
Ms. Coomaraswamy ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ay qusayso ilalainta carruurta oo ay ka midyihiin xafiiska siyaasadda Qaramada Midoobey ee somalia ee (UNPOS), in ay labalaabaan dadaaladooda si loosoo ururiyo macluumaad waafi ah oo laysku halaynkaro oo ku saabsan xad-gudubyada xun ee loo geysto carruurta somaliyeed.